Iwu ụlọ ọrụ | Law & More B.V.
Iwu azụmaahịa / iwu ụlọ ọrụ
You chọrọ ịmalite ụlọ ọrụ? Ka ịbu onye ọchụnta ego ugbua? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ị ga - aghọrọ iwu azụmahịa. Ugbua n'oge ntinye nke ụlọ ọrụ ị ga-emerịrị iji jụọ ajụjụ ụdị ụlọ ọrụ kacha adabara gị. Ọzọkwa, a ga-ederịrị ụdị nkwekọrịta niile. N'ime ọtụtụ afọ ọtụtụ nwere ike ịgbanwe n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Mpempe ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị adabara ya ọzọ. Esemokwu nwere ike ibilite n’etiti ndị nwere oke ma ọ bụ n’etiti ndị otu.
N'AGBAS OF OBI CBỌCHOR?
Jụọ maka enyemaka iwu
You chọrọ ịmalite ụlọ ọrụ? Ka ịbu onye ọchụnta ego ugbua? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ị ga - aghọrọ iwu azụmahịa. Ugbua n'oge ntinye nke ụlọ ọrụ ị ga-emerịrị iji jụọ ajụjụ ụdị ụlọ ọrụ kacha adabara gị. Ọzọkwa, a ga-ederịrị ụdị nkwekọrịta niile. N'ime ọtụtụ afọ ọtụtụ nwere ike ịgbanwe n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Mpempe ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị adabara ya ọzọ. Esemokwu nwere ike ibilite n’etiti ndị nwere oke ma ọ bụ n’etiti ndị otu. Ma ọ bụ ikekwe ụlọ ọrụ gị enweghị nnukwu mmiri mmiri zuru oke. Law & More bụ ọkachamara na mpaghara nke iwu azụmahịa Dutch. Site na mgbe e guzobere rue oge ntinye ụlọ ọrụ, anyị nwere ike ịnye gị ndụmọdụ gbasara iwu na usoro gbasara ego.
> Iwu ndi mmadu iwu
> Gọọmentị Corporation
> Njikọ ọnụ na inweta
> Enweghị echiche nzuzu
Iwu ndi mmadu iwu
anyị na Law & More nwere ike inyere gị aka ịhọrọ ụdị ụlọ ọrụ ziri ezi. Enwere ike ịkpa oke n'etiti ụdị nke ụdị iwu na ụdị ya na ụdị enweghị iwu. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere àgwà nke iwu, ọ nwere ike isonye na azụmahịa iwu dịka ndị mmadụ. N'okwu ahụ ụlọ ọrụ gị nwere ike ikwubi nkwekọrịta, nwee ihe onwunwe na ụgwọ ma nwee ike ịkwụ ụgwọ.
Mgbe ịchọrọ ị na-agba ụlọ ọrụ, ị ga-ahọrọ fọm ụlọ ọrụ. Kedu ụdị iwu dabara adaba na-adabere na ihe dị iche iche, dịka ihe ndị chọrọ maka mmekorita, ụdị iwu, nkwonkwo na ọtụtụ ibu na ike ịbụ transferability nke mbak. Gini ga eme ma oburu na otu onye n’ime ndi mmadu na - emekọ ihe (VOF) chọrọ ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ? Kedu maka Flex-BV? Iwu ndi ụlọ ọrụ na-achịkwa usoro ndị a. Enwere ike ịhazi ọtụtụ ihe tupu oge eruo. Ọ bụ ya mere o ji dị mma itinye aka n'ọrụ ndị ọka iwu ụlọ ọrụ tupu ịtọlite ​​ụlọ ọrụ ahụ.
You, dika ndi ulo oru, choro imekorita ndi ulo oru ndi ozo na ebum n’ichebe onodu ahia gi? Ma ọ bụ, na ntụle, na-enwe atụmatụ ịbanye n’ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ mmekorita dị mkpa, anyị nwere ike ịgwa gị maka ọghọm na uru dị. Ọzọkwa, anyị nwere ike, ọnụ, chọpụta ụdị mmekorita kwesịrị ekwesị.
I bu n’obi ijikọ ụlọ ọrụ gị na onye ọzọ, maka ịchọrọ ịkwalite uto dịka ọmụmaatụ? Mgbe ahụ enwere ụdị ngwakọta atọ: njikọ ụlọ ọrụ, njikọ ngwaahịa na ngwakọta iwu. Nke kachasị adabara ụlọ ọrụ gị dabere na ọnọdụ akọwapụtara. Law & More Ndị ọka iwu nwere ike inye gị ndụmọdụ gbasara okwu a.
Mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ ọzọ nwere ike ịmasị gị. Ọ nwere ike nye gị resị ya ahịa gị. Ọ bụrụ n’uche ịnabata arịrịọ a, mgbe ahụ anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ tupu oge eruo. Anyị nwekwara ike ikwurita maka gị.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ achọghị ka ere ya ma nyefee ndị ga-eketa òkè ahụ, anyị na-ekwu maka iweghara nnabata. Anyị maara otu esi echedo ụlọ ọrụ gị n'ọnọdụ dị ka nke ahụ ma nwee ike inyere gị aka na ndụmọdụ gbasara iwu.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ka ị na-arụsi ọrụ ike, ọkachasị ma ọ bụrụ na gị dịka ụlọ ọrụ na-azụ ụlọ ọrụ ọzọ. Youchọrọ ozi niile dị mkpa iji mee nhọrọ iche echiche banyere mmakọ ma ọ bụ nnweta.
Ndị ụlọ ọrụ iwu nke Law & More ga-enye gị ndụmọdụ nghọta dị omimi gbasara ụlọ ọrụ gị. Anyị na-atụgharị iwu ahụ na usoro ndị bara uru, ka i wee nwee ike irite uru na ndụmọdụ anyị. Na mpempe, Law & More nwere ike inye gị enyemaka gbasara iwu n'ihe ndị a:
• nguzobe nke ulo oru
• imekọ ihe n'etiti ụlọ ọrụ
• jikọtara ọnụ na inweta
• mkparita uka na ikwurita okwu banyere esemokwu di n'etiti ndi nwe ulo na ndi ozo
• ibu ọrụ na-eduzi
Mgbe ahụ kpọtụrụ anyị site na ekwentị +31 40 369 06 80 nke stuur een e-mail naar: